मनतातो पानिको यस्ता छन् ५ आश्चर्यजनक फाइदा - Gaunbeshi
मनतातो पानिको यस्ता छन् ५ आश्चर्यजनक फाइदा
Posted on २४ आश्विन २०७७, शनिबार ०७:३७ Author Gaunbeshi Comment(0)
काठमाडौँ। पानी एक प्राकृतिक औषधी हो र यसले विभिन्न रोगहरूलाई निर्मूल गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया मनतातो पानी भन्नाले न चिसो न तातो जसलाई सजिलै सँग मानिसले पिउन सक्छन् । यसले पाचन सुधार गर्नुका साथै, कब्जियतको समस्यालाई पनि निर्मूल गरी शरीर लाइ आराम महसुस गराउँदछ। त्यसै गरी मनतातो पानी जाडो मौसममा मात्र नभएर यो हरेक मौसमका लागी लाभदायक छ। अध्ययन अनुसार मनतातो पानीले केही हद सम्म शारीरिक दुखाइहरू समेतलाई कम गर्ने गर्दछ।
जानिराखौँ मनतातो पानीको अचुक फाइदाहरू:
१. पाचन प्रणालीको सुधार: दैनिकरुपमा मनतातो पानीको सेवनले पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुको साथै यसले खानालाई सजिलै पचाउन मद्दत गर्दछ। यसले कब्जियत भएका व्यक्तिलाई समेत रामवाणको काम गर्दछ। कतिपय मानिसहरूलाई जाडो मौसममा पिसाब सम्बन्धी समस्या हुने गर्दछ जसका कारण उनीहरूले नियमित रूपमा टोइलेट गइराख्नु पर्दछ। यस्तो समस्याबाट बच्न यदि त्यस्ता मानिसले जाडो मौसममा सधैँ मनतातो पानी पिउँदा यस्ता समस्याहरू हटेर जान्छ ।
२. रुघा खोकीलाई टाढा राख्ने : चिसो मौसममा प्राय: मानिसहरूलाई रुघा खोकी लाग्ने गर्दछ। दैनिक मनतातो पानीको सेवनले जाडो मौसममा हुने सम्पूर्ण भाइरल तथा सङ्क्रमणहरूलाई टाढा राख्दछ। त्यसै गरी, यदि कोही व्यक्ति त्यस्तो सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछ भने सङ्क्रमणको समस्या आउन नदिन दैनिक मनतातो सेवन गर्नु लाभदायक हुने गर्दछ।
३. रक्त प्रवाहमा सहयोग: दैनिक मनतातो पानीको सेवनले शरीरमा रक्त प्रवाह राम्रो सँग हुने गर्दछ। यदि शरीरमा राम्रो सँग रक्त प्रवाह भयो भने रक्तचाप देखि हृदय सम्बन्धी रोगको जोखिम कम भएर जान्छ। त्यसैगरि रात्रिकालीन अवस्थामा मनतातो पानीले नुहाउँदा आरामदायी निद्रा लाग्ने गर्छ।
४. तनावको स्थिति घटाउन सहयोगी: एक अध्ययनका अनुसार, नियमितरुपमा मनतातो पानी पिउँदा केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको कार्यहरू सुधार हुनुको साथै यसले चिन्ता वा तनावबाट मुक्ति दिने गर्दछ। त्यसै गरी, यदि त्यस मनतातो पानीमा थोरै दूध मिसाएर पिउँदा मानिसलाई शान्त महसुस गराई कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्ने गर्दछ।
५.अनावश्यक तौल घटाउन मद्दत गर्दछ: जाडो मौसममा मानिसहरू प्राय: चिल्लो, पिरो, फ्राइड तथा अन्य परिकारका खानाहरू सेवन गर्ने गर्दछन् र यी खानाहरू चिसो मौसममा पच्ने पनि गर्दछन्। अन्ततः यसले तौल बढ्ने समस्या निम्त्याउद छ जसले गर्दा जाडो मौसममा प्राय:को तौल बढ्ने गर्दछ। यदि नियमित रूपमा मनतातो पानी पिउँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
नेपालमा कोरोनाः आठ सय ६२ जनाले ज्यान गुमाए
Posted on ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:५७ Author Gaunbeshi
काठमाडौं, कार्तिक ११ । नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या आठ सय ६२ पुगेको छ । पछिल्लो समय संक्रमितसंगै ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढ्दै गएको हो । सोमबार मात्रै नेपालमा १५ जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपालमा एक लाख ५९ हजार आठ सय ३० जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको […]
Posted on २४ आश्विन २०७७, शनिबार ०७:१२ Author Gaunbeshi
काठमाडौँ। ज्वानो एक प्रकारको वनस्पति हो, जसलाई खानामा मसलाका साथै खानाको स्वाद बढाउन प्रयोग गरिन्छ। ज्वानोमा थुप्रै औषधीय गुणहरु पाइन्छ, जसले मानिसमा हुने स–साना शारीरिक समस्याहरुबाट जोगाउँदछ। यसको प्रयोग रोगअनुसार फरक पर्दछ। जस्तै यसको सुप बनाएर पिउने, धुलो बनाएर खाने वा खानामा मसला बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। जानिराखौं ज्वानोको १२ फाइदा १. अनावश्यक तौलको नियन्त्रण […]
Posted on ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:४० Author Gaunbeshi
काठमाडौँ। मनाव शरीरको एक अति महत्वपूर्ण र सबैभन्दा सक्रिय अंग हो, फोक्सो। फोक्सोकै कारण शरीरका विभिन्न कोशीकाहरुले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन पाउने गर्दछन्। श्वासप्रशासको क्रममा फोक्सोले शरीरबाट कार्बोनडायोक्साइड ग्यासलाई फ्याल्न मद्दत गर्दछ । एक स्वस्थ व्यक्तिले एक दिनमा लगभग २५ हजार पटक सास फेर्ने गर्छन् । नदेखिने अंग भएका कारण प्रायःजसो मानिसहरुले सास फेर्न कुनै समस्या […]
दसैंमा सिभिल अस्पतालका आकस्मिकबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द
Posted on ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:४२ Author Gaunbeshi
पशुपति नाथको मन्दिरमा सोमबार बिहानै श्रीमति सहित किन पुगे प्रधानमन्त्री केपी ओली ?
Posted on १२ माघ २०७७, सोमबार १२:२४ Author Gaunbeshi
Posted on २७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:५६ Author Gaunbeshi
विद्युतीय धरापमा परेर पाकिस्तानमा १४ सुरक्षाकर्मी मारिए
Posted on ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:५१ Author Gaunbeshi
पाथिभरा माताको दर्शन गरि माघ १४ गते बुधबारको, राशिफल हेर्नुहोस्
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा तोलाको कति
Posted on १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:४२ Author Gaunbeshi
यीनलाई मन्त्री बनाउन ओली राजी, प्रचण्डको गोजीबाट यी नाम
Posted on २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:१० Author Gaunbeshi
एक घण्टामा ६२ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार, नेपाल लाइफको सबैभन्दा बढी
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १२:२३ Author Gaunbeshi